Ịhụnanya ndị mmadụ
Psychology na mmekọrịta Ịhụnanya
Na ndụ onye ọ bụla, e nwere usoro obi ụtọ. Nye ụfọdụ, ọ na-arụ ọrụ, ndị ọzọ nwere obi ụtọ inwe ụlọ n'elu isi ha, ndị ọzọ adịghị eche na ha enweghị akụ na ụba. Ma o siri ike iji ihe ọ bụla tụnyere mmetụta mgbe ịhụnanya mmadụ na-abịa ná ndụ. Ọ na-ezute n'oge na-adịghị anya, ndị nwere ike ịghọta ụdị mmetụta a nwere ike ịchọta nke ọma. Ma ihe ị ga-eme maka ndị na-enwebeghị obi ụtọ izute ọkara nke abụọ ha? Karịsịa maka ndị na-enwe obi abụọ ma ànyị nwere ịhụnanya n'otu ụwa nakwa na e kere isiokwu a.
Enwere ịhụnanya dị?
Ọtụtụ mgbe na enweghị ịhụnanya, kwuo ndị na-ere ọkụ banyere ụdị mmetụta a dị ka ihe dị mma. E kwuwerị, ọ bụrụ na ọ bụ naanị ya na-eweta obi ụtọ, mgbe ahụ, ndị hụrụ n'anya, ma ndị a na-ahụghị n'anya, aghaghị inwe ezigbo ọdachi na ndụ ha. Ọ dịghị ihe dị njọ karịa mmeri nke onye ị hụrụ n'anya. N'aka nke ọzọ, na ọha mmadụ nke oge a, echiche dị otú ahụ dịka ezi ịhụnanya dị iche iche aghọwo ihe na-erughị ala na nke na-adịghị adịkarị. Mmekọahụ malitere ịba uru, ego na ọkwa dị oke elu, nakwa na ọ bụ omenala ịsị "na mgba." Ịhụ n'anya ka ọ na-enwe mmetụta nke nta ka ọ kwụsị ime na ụdị ya dị ọcha. Ma ọ dị adị. Na iji zaa ajụjụ banyere otu esi enweta ịhụnanya ịhụnanya, ọ dị mkpa ime ihe abụọ dị mkpa: ịmụta otú ị ga-esi hụ onwe gị n'anya na mgbagwoju anya gị niile na adịghị ike gị, ma wepụ ihe ndị na-ezighị ezi na agụụ ọ bụla nke abụọ ga-eme ka mmekọrịta dị mma.
Olee otú iji nweta ịhụnanya nke ibe?
Fọrọ nke nta ka onye ọ bụla kwuru n'onwe ya, sị: "Achọrọ m inwe ịhụnanya," anaghị akọ na ọ sitere na omimi nke mkpụrụ obi. Kedu ka ị ga - esi na - emeso onwe gị ihe na nkatọ ma chere ka onye ọzọ hụ gị n'anya n'agbanyeghị ihe ọ bụla?
Ọ bụ ya mere ihe mbụ ị chọrọ iji malite bụ ịhụ onwe gị n'anya, ahụ gị na àgwà gị. Ghọta onwe gi na ị bụ onye pụrụ iche ma bụrụ onye a na-apụghị ịchọpụtacha. Mmadụ nwere ike iji ọnụ ọchị gị hụ gị n'anya, mana ị na-aga n'ihu mgbe niile. Onye ga-amasị ahụ gị, ma ị na-ezo ya na hoodies na uwe ndị na-adịghị edozi. Gbanyụọ ihe mkpuchi nke mgbagwoju anya, ị ga-ahụkwa na ọ fọrọ nke nta ka onye ọ bụla kee maka ịhụnanya.
Nkwupụta ahụ bụ na ịhụnanya bụ naanị mmekọrịta abụghị eziokwu mgbe niile. Ma mgbe ufodu, n'amaghi ezi uche, iji meghachita uche, onye aghagh ibu uzo esi hu ya n'anya, n'enyegh anya ihe obula. Ọ bụ mgbe niile ka ịhụnanya dị. Ma n'ihi nnyefe, ọ dị mkpa ịnweta ike, ịgbaghara, ịnabata na ichere.
Ọ bụrụ na anyị na-anọdụ n'ụlọ ma na-eche ka ịhụnanya a na-abịa, anyị nwere ike ịdị ndụ ruo agadi ma enweghi mmekọrịta. Chọrọ ka a hụ gị n'anya? Mgbe ahụ, ezoola n'ụlọ n'okpuru ákwà nkpuchi na igbe chocolates na akụkọ ịhụnanya. Bịa n'ìhè ahụ. Gosi ụwa ya ịma mma na àgwà ya. N'oge na-adịghị anya, a ga-enwe onye ga-ahụ ma ghọta ihe a dum.
Ịchọta onye a hụrụ n'anya nke na-esote ya, agbanyela n'olu ya ma ọ bụrụ na ị rịọ maka ịnweta nke ọ bụla n'ime ịhụnanya. Ya mere, ajụjụ gbasara otu esi mata ma ịhụnanya ọ bụ otu ọ dịghị edozi. Bụrụ onye ị hụrụ n'anya, nkwado na nkwado. Na-achụ onwe gị n'àjà n'ihi ya na oge, site na omume ya, gị onwe gị ga-aghọta otú ọ dịruru n'anya. Ma echefula na ị na-ahụkarị ịhụnanya, sms-na na mgbalị ikwu banyere mmekọrịta nwere ike ịhapụ onye ọ bụla si n'aka gị.
Cheta na onye a hụrụ n'anya nwere ikike nke nnwere onwe. Nnụnụ anaghị agbapụ n'èzí. Ya mere, echela onye ahụ n'akụkụ gị, ma ọ bụrụ na ọ hụrụ gị n'anya n'ezie, ma ọ bụghị naanị na ọ ga-ala azụ, ma kpebiekwa ịhapụ ịhapụ ma ọlị.
Ọ ghaghị ịdịrịrị ibe gị n'anya. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ onwe gị ọkụ ma zute onye na-ebughị ịzaghachi mmetụta gị, jiri okwu a dịka ihe atụ maka ịrụ ọrụ na mmejọ. Enwela iwe megide ndị na-adịghị adabere na gị, mezue onwe gị, mgbe ahụ, onye ga-agwa gị okwu ịhụnanya nke ị na-eche ogologo oge.
Ekworo bụ nkà mmụta uche
Di ahụ akwụsịla ịhụ n'anya - ihe ịrịba ama
Ịhụnanya na agụụ
Kedu ka ị ga-esi kwụsị onye ọ bụla?
Gini mere ndi mmadu ji acho?
Olee otú ị ga-esi bụrụ onye a hụrụ n'anya ma nwee obi ụtọ?
Kedu otu esi achọta onye ihu n'anya?
Kedu ihe na-eme mmadụ obi ụtọ, olee omume?
Ihe ngosi nke ima mmadu n'anya nwanyi
Kedu otu esi akụziri onye na-adịghị ekele?
Olee otú ị ga-esi hụ di ya n'anya ọzọ?
Mmiri site na nwoke
Ntucha nke kisses
Burdock mgbọrọgwụ - bara uru Njirimara na contraindications
Kedu ka esi eto eto maka akwukwo?
Layfaky stagnation: Atụmatụ 15 a sitere na magazin bụ "Science na Life" ga-eme ka ị bea ákwá!
Ejiri odo odo
Kedu ihe ọ na-ewe maka nwata nke atọ?
Achịcha na-etinye na ngwa ndakwa nri na-enweghị mmiri ara ehi
Tiles maka terracotta
Na-akwagharị na cascade na-ajụ isi
Karịa ịmepụta mkpụrụ osisi strawberry na ihe opupu ihe omimi na mmiri?
Hepel maka ụmụ amụrụ ọhụrụ
Ogwe mgbidi MDF MD
Ebe obibi nke Honduras
Sedalgin Neo - mejupụtara
Snowdrops nke sweets
Jiri aka gị na-edepụta akwụkwọ
Ezigbo ejiji 2014
Mmekọahụ mgbe ị na-ebu ọnụ
Ụzọ iri iji weghachite ntorobịa
Victoria Beckham duuru nwa Harper na ballet